China Mould Temperature Controller Manufacturer and Supplier |Hero-Tech - 乐动平台网址,乐动体育app官网入口
Mpandrindra ny maripana bobongolo
Chiller karazana Screw mangatsiaka rano
Fampangatsiahana visy mangatsiaka mangatsiaka amin'ny rano
Fampidirana vokatra MTC dia ampiasaina indrindra hampihenana ny fotoana mialoha ny bobongolo, hifehy ny mari-pana amin'ny bobongolo, hisorohana ny fikorianan'ny marika, na ny trangan-javatra hafa tsy ilaina amin'ny tany voavolavola, mifehy ny hafanana tsy tapaka.Fampiharana ny indostrian'ny plastika & fingotra Die casting indostria: Zinc, Aluminum ary Magnesium.Azo ianteherana, maro samihafa, fampangatsiahana avo lenta.Ny fanamafisam-peo HERO-TECH dia manome lanja ny fampiharana isan-karazany miaraka amin'ny safidy hahombiazana amin'ny angovo.Famolavolana endri-javatra - Rafitra informatika micro...
MTC no tena ampiasaina mba hampihenana ny lasitra Preheating fotoana, fanaraha-maso ny mari-pana bobongolo, hisorohana ny mikoriana marika, na tranga hafa tsy ilaina eo amin'ny lasitra ambonin'ny, mifehy ny mari-pana tsy tapaka.
Indostria plastika & fingotra
Die casting indostria: Zinc, Aluminum, ary Magnesium.
Azo ianteherana, maro samihafa, fampangatsiahana avo lenta.
Ny fanamafisam-peo HERO-TECH dia manome lanja ny fampiharana isan-karazany miaraka amin'ny safidy hahombiazana amin'ny angovo.
微机rafitra noraisina, PID自动mari-pana controller, afaka mifehy ny menaka sy ny rano mari-pana ao anatin'ny ± 1 ℃.
-Stainless fanafanana barika misy fitaovana, manasongadina fanafanana haingana sy hihena, mora ny fanadiovana.
——Paompy hafanana分miaraka amin'ny fahombiazana avo lenta,
manasongadina fanerena avo, mikoriana lehibe, feo ambany sy ny fahamarinan-toerana avo.
-Kabine matevina, matevina ary vovoka misy endrika kanto, ny takelaka famotsorana haingana dia manome fikojakojana mora.
-Equipped amin'ny fanairana sy ny maro fault indicators, raha nisy lesoka, ny fanairana dia ho mandeha ho azy, ny fahadisoana code aseho, ny mpanjifa dia ho fantatry ny voalohany ny fahadisoana sy ny antony, ary ny tanana ara-potoana, izany hoe ny fiarovana ny rafitra mihazakazaka.
-Mitondra fitaovana fiarovana amin'ny filaharan'ny dingana, fitaovana fiarovana amin'izao fotoana izao, fitaovana fiarovana amin'ny haavon'ny rano, fampitana fotoana elektronika, sns.
-Ekipa processional: Ekipa injeniera manana traikefa 15 taona eo ho eo amin'ny vata fampangatsiahana indostrialy, ekipa mpivarotra manana traikefa 7 taona eo ho eo, ekipa serivisy manana traikefa 10 taona eo ho eo.
-Vahaolana namboarina foana omena araka ny fepetra takiana.
-3 dingana fanaraha-maso kalitao: fanaraha-maso ny kalitao miditra, fanaraha-maso ny kalitaon'ny dingana, fanaraha-maso ny kalitao mivoaka.
- antoka 12 volana ho an'ny vokatra rehetra.Ao anatin'ny garantie, misy olana nateraky ny tsy fahampian'ny chiller mihitsy, serivisy atolotra mandra-pahavaha ny olana.
Tombontsoa efatra amin'ny HERO-TECH
• Brand tanjaky: Izahay no matihanina sy ambony mpamatsy ny indostria chiller amin'ny 20 taona traikefa.
• Torolàlana matihanina：Teknisianina matihanina sy za-draharaha & serivisy ekipa varotra ho any amin'ny tsena any ivelany, manolotra vahaolana matihanina araka ny fepetra takiana.
•Stable staffs ：Stable staffs dia afaka miantoka ny vokatra azo antoka sy avo lenta.Mba hiantohana ny serivisy avo lenta sy ny fanohanana aorian'ny varotra mahomby.
• Serivisy volamena: Valiny antso an-tariby ao anatin'ny adiny 1, vahaolana atolotra ao anatin'ny 4 ora, ary ekipa fametrahana sy fikojakojana any ivelany.
teo aloha:Oil Chiller
Ny mari-pana ℃
Hery fanafanana kw
Condenser Herin'ny motera kw
Fanerena max Kg/cm2
Savaivony fifandraisana fifandraisana santimetatra
Isan'ny fidirana sy fivoahana
Sodina rano mangatsiaka santimetatra
lafiny halavan'ny mm
Lanja afa-karatsaka kg
Fanamarihana: Tokony ho lehibe noho ny 2kg/cm2 ny fanerena ny rano raha lasitra ny karazana rano
controller maripana mifandray amin`ny paompy rano.
Raha misy fepetra manokana, azafady mba hampandre anay.
Izahay dia manana zo hanova ny fepetra tsy misy fampandrenesana fanampiny.
Q1: Afaka manampy anay ve ianao hanoro ny modely ho an'ny tetikasanay?
A1: Eny, manana injeniera izahay hanamarina ny antsipiriany ary hifidy ny modely mety aminao.Mifototra amin'ireto manaraka ireto:
1) Fahaiza-manao mangatsiaka;
2) Raha tsy fantatrao dia azonao atao ny manolotra ny taham-pidirana amin'ny milinanao, ny mari-pana ary ny hafanana avy amin'ny ampahany ampiasainao;
3) Ny mari-pana amin'ny tontolo iainana;
4) Refrigerant karazana, R22, R407c na hafa, pls manazava;
6) indostrian'ny fampiharana;
7) Ny fikorianan'ny paompy sy ny fepetra takiana;
8) Ny fepetra manokana hafa rehetra.
Q2: Ahoana no hiantohana ny vokatrao amin'ny kalitao tsara?
A2: Ny vokatray rehetra miaraka amin'ny taratasy fanamarinana CE sy ny orinasanay dia manaraka tsara ny rafitra fitantanana kalitao ISO900.Mampiasa ny kojakoja marika malaza maneran-tany izahay, toy ny DANFOSS, COPELAND, SANYO, BITZER, compressor HANBELL, singa elektrika Schneider, singa fampangatsiahana DANFOSS / EMERSON.
Ny singa dia hotsapaina tanteraka alohan'ny fonosana ary hojerena tsara ny fonosana.
Q3: Inona ny fiantohana?
A3: fiantohana 1 taona ho an'ny ampahany rehetra;Tsy miasa ny fiainana manontolo!
Q4: Mpanamboatra ve ianao?
A4: Eny, manana mihoatra ny 23 taona izahay amin'ny orinasa fampangatsiahana indostrialy.Ny orinasanay any Shenzhen;Tongasoa eto aminay amin'ny fotoana rehetra.Manana patanty ihany koa amin'ny famolavolana ny chillers.
Q5: Ahoana no ahafahako mametraka baiko?
A5: Alefaso anay ny fanontaniana amin'ny alàlan'ny mailaka: sales@szhero-tech.com, antsoy izahay amin'ny alàlan'ny laharana Cel +86 15920056387 mivantana.